Kambodza: Khmer-Amerikana olomalaza nasongadina tao anatin’ny Vondrom-piarahamonina Weblogger · Global Voices teny Malagasy
Kambodza: Khmer-Amerikana olomalaza nasongadina tao anatin'ny Vondrom-piarahamonina Weblogger
Voadika ny 16 Jona 2019 8:00 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2006)
Teraka tamin'ny taona 1983, Soben Houn, izay hita teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny maha Oliravina Utah USA 2006 azy, nisolo tena an'ireo vondrom-piarahamonina Kambodziana sy Amerikana ary i Kambodza manontolo. Amin'ny maha-malaza azy, izy no hanome lanja ny fampianarana ambony ao anatin'izao vanim-potoana nomerika izao. Ary mikatsaka ny handray anjara amin'ny Oliravina USA 2006 izy amin'ny 21 aprily.
Mba hankalazàna sy hanohanana an'i Soben Houn, nanokatra weblog ‘Soben Huon – Oliravina Utah USA 2006 ireo mpankafy azy, tamin'ny fanehoan-dry zareo ny fireharehàny sy ny fankasitrahany ny zavabitany. Teo amin'ilay Weblaogy tohanan'ireo mpankafy azy, azon’ ireo mpitsidika vakiana ny mombamomba an'i Soben, ireo tahirim-baovao, ireo vaovao mikasika ny fifaninanana efa lasa, na mijery ny tandavan-tsary ary, mazava loatra, ireo fanehoankevitra avy amin'ireo mpamaky.
Ny anaram-boninahitrao Oliravin Utah dia mitondra an'i Kambodza sy ireo Khmers ho amin'ny laza goavana, ho ambany mason'izao tontolo izao ary fanantenana betsaka. Mirehareha noho ianao ny vahoaka Khmers rehetra. Mbola tena manandanja ihany koa, inoako fa hifaninana ianao haka ny Anaram-boninahitra Erantany Oliravin'ny Tontolo.. Ny anaranao Soben (midika hoe Nofy) dia mifanaraka tsara amin'ireo zavatra andresenao lahatra sy nifoforanao mafy. Maniry sy manantena mafy aho fa ho tanteraka ny Soben-nao (ireo nofy). Tohizo ny asa tsaranao. Mirary soa ho anao:-)
Araka ny voalazan'ny teratany amerikana izay niasa tany Kambodza nandritra ny taona maro ary ankehitriny efa azo ambara ho mahay miteny khmer, mahaliana an'i Jinja ny hahalala izay eritreretin'ireo Khmers namany mikasika ny fifaninanana hatsaràna Amerikana mahazatra isantaona. “Hihorohoro ny ankamaroan'ireo fianakaviana avy any ambanivohitr'i Kambodza hahita an'ireo zanany vavy mandray anjara amina fifaninanana ho an'ny daholobe amina fitafy fitondra milomano. Saingy tsy ‘Tovovavy Freshie’ ity.”
Sady koa, naneho hevitra toy izao i Angelie Oum, iray amin'ireo mpankafy azy:
“Tiako fotsiny ny haneho hoe hatraiza no hireharehako amin'ny foko manontolo sy hasambako mahita tovovavy Amerikana taranaka Khmer iray, mahira-tsaina, tsara tarehy ary mahabe fanantenana, mandrary fifandraisana amin'ireo olona ao amin'ireo vondrom-piarahamonina any an-tany niaviany sy ao amin'ny firenena. Tsy ho afaka tonga tamin'izao toerana misy azy ankehitriny izao i Soben, raha tsy misy ny fahiratan-tsainy, ny toetrany tsy mihambahamba, ny hatsaràny sy ny fikirizany, fantatro fa misy ireo vehivavy tanora sy ireo lehilahy izay mijery azy amim-panajàna.”
Antenaintsika fa, ho tahaka ny Oliravina Erantany 1994, Aishwarya Rai, hanainga koa anie izy fanajana, fijery mankamin'ny fahombiazana sy ny miabo ao anatin'izay vondrom-piarahamonina rehetra soloiny tena. Araka ny tafatafa nataony sy ny reniny, izay reko noresahina tao anaty onjampeo khmer iray, avy amina fianakaviana tsara fototra sy mendri-kaja izy. Deraiko izany. Tohanako ireo ezaka sy ny làlana lava hodiaviny.”
Rehefa jerena ny fomba fiseraseràna avy lavitra moravidy sady tsara, ny weblog angamba no safidy tsara indrindra. Mpankafy azy an'arivorivony sy Kambodziana avy amin'ireo faritra maro samihafa no ho afaka hanjohy ny fahitàna azy amin'ny tambajotra, ary afaka mifandray mivantana ny roa tonta. Nandritra ireo taona tany aloha, tamin'ny alalan'ny imailaka no nifandraisan'ireo Kambodziana nipetraka tany ivelany tamin'ireo fianakaviany, namany ary ireo akaiky azy indrindra tany Kambodza, izay tena mora vidy tokoa ho an'ny maro. Maro ireo mifampizara vaovao mahaliana sy ireo vaovao hafa amin'ny alalan'ny vondrona fifanakalozambaovao. Niova izany tato ho ato. Tsy hoe fotsiny noho ny fahafahan'ireo mpampiasa mandefa antso amin'ireo telefona iraisam-pirenena mora vidy, avy amin'ny Voice Over Internet Protocol (VOIP) ihany akory, fa ankehitriny ry zareo efa afaka mizara haingana an'ireo tantarany isanandro, amin'ny alàlan'ireo diary manokana an-tambajotra, ahitana fitanana a-tsoratra vitsivitsy sy sary nopihana tamin'ny findain'izy ireo.